Ifektri abakhiqizi bekhwalithi ephezulu evaliwe ephezulu Sanxin
Connect Isixhumi sensimbi yenjoloba yokumnika ingcindezi enhle
Material Izinto ezintsha, i-DEHP mahhala
I-plasticizer (DEHP) -free polyurethane material esetshenzisiwe ine-biocompatibility enhle kakhulu, igwema i-plasticizer (DEHP) ekulimaleni kweziguli nabasebenzi bezokwelapha.
Window Ifasitela lokubuyisa igazi eliseceleni
Ukubuyiswa kwegazi kungabonakala ngokushesha ngesikhathi esifushane, okungakusiza ukwahlulela impumelelo yokubhoboza ngokushesha okukhulu futhi uthuthukise izinga lokuphumelela kokubhoboza.
Cl Ukubamba ngesandla okukodwa
Idizayini eyindilinga yamukelwa ngocingo lwesandla esisodwa, ngakho-ke akukho ngcindezi engemihle ezokwenziwa ku-lumen. Okwamanje ngocingo, izokhama ithonsi loketshezi lokuvala ithubhu ukukhulisa umphumela omuhle wokucindezela.
Amamodeli nokucaciswa: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24Gand 26G
Olandelayo: Ukucindezela okuqondile kwe-catheter IV
Izinaliti ze-Iv Catheter
Izinhlobo ze-Iv Catheter
Iv Catheters Iyathengiswa